INTERNETKAA LAGU SOO QORAY!
Maxaad sheegtay?, waa weedh ka mid ah hadalada ay isku salaamaan marka ay laba qof oo Soomaaliyeed kulmaan.
Nolosha iyo dabeecadda reer guuraanimo ee aynu ka soo jeedno oo ah mid ay had iyo jeer col iyo abaaro aafeeyaan ayaa ka dhigay Soomaalidu inay noqoto war ku nool.
Ka degan, ka safarka ah iyo ka sahanka ah intuba waxay u baahanyihiin war, kaasoo noloshooda lagama maarmaan u ah.
Teknoolajiyadda casriga ah ee hadda dunidu ku tallaabsatay ayaa Soomaalida iyo caalamka kalaba u suurto geliyay inay ka haqab beelaan baahida ay wararka u qabeen, dunidiina waxay isu rogtay tuulo yar oo wixii ka dhaca markiiba geesteeda kale laga dareemo.
Hadaba internetka ayaa wuxuu noqday meel waayadan danbe ay Soomaali badani warka ka helaan, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaya shabakadaha ay Soomaalidu leeyihiin ee wararka soo gudbiya.
Su’aasha hadaba isweydiinta u baahani waxay tahay ma la isku halayn karaa wararka shabakadaha Soomaalidu qoraan?
Si aan su’aashan jawaab ugu helno bal marka hore aan yara milicsano dabeecadaha shabakadaha Soomaalida iyo qorayaashoodaba.
Marka aad gasho internetka waxaad arkaysaa websiteyo Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo loogu wan qalay magacyo Gobolo,Maagaalooyin, Tuulooyin, Qabiil iyo magac kasta oo dhadhan iyo macno wax soo jiidan kara leh..
Shabakadahan badankooda ayaa u muuqda sida goofaf ay qabiilooyinku kala degeen oo qofkastaa uu ogyahay midka uu ku xeroonayo, waxaana iigu yaab badnaa markii aan ka helay faariin email ah nin aanan garanayn kaasoo igu eedeeyay inaan wax ku qaro websiteyo qalaad. Malaha goofkii uu iga filayay inaan ku soo hoydo ayaan garab maray oo meel aanu iga malaynayan iska dalaq idhi.
Internetku waa aalad si dhib yar oon kharash iyo hawl badan u baahnayn wararka la isugu gudbin karo, taas ayaana u sabab ah korodhka shabakadaha Soomaalida.
Hadaba haddii waa dadku Soomaaliyeed marka ay kulmaan isweydiin jireen BBC-du maxay sheegtay, maanta kuwo badani waxay is weydiiyaan internerka maxaa lagu soo qoray?!
Internetku ma sahlin war helidda oo keliya balse waxaa iyana aad u batay dadka wax ku soo qora ee aragtidooda ka dhiibta arimaha Soomaaliya ama dunida inteeda kaleba ka taagan. Waxaa sidoo kale batay dadka isku tilmaama Saxafiyiin hase yeeshee inta saxaafadda aqoonta u lihi ku yartahay.
Tafatire, Qoraa, Saxafi madax bannaan iyo cinwaano kale ayaa maanta kuwo badan oo aan u qalmin isu caleemo saareen iyagoo aan aqoon iyo waayo aragnimo midna u lahayn xirfadda ay sheeganayaan.
Saxafinimadu waa xil culus una baahan aqoon, taxadir, akhlaaq iyo hubsiimo badan maadaama waxa aad fidinaysaa saamayn ku yeelan karaan mujtamaca ayna ka iman karto mararka qaarkood dhibaato ay mas’uuliyaddeedu kugu soo noqonayso.
Ereyga Saxafi ayaa waxaa lagu qeexaa qof ka shaqeeya saxaafadda, kaasoo u abuura xirfad ahaan warbixino si loogu faafiyo qalabka warbaahinta sida wargeysyada, TV-ga, Raadiyaha, Filimada dokumentariga ah iyo Internetka.
Saxafi waxaa iyana la odhon karaa dadka qabta shaqooyinka la xiriira saxaafadda sida tafatiridda iyo sawir qaadidda.
Waxaan u baahanahay war si aan u noolaano, u difaacno nafteena, una kala garano saaxiibka iyo nacabka. Hadaba saxaafaddu waa habka bulshada u soo gudbin kara warkaas, taas ayaana sababtay inaynu danayno dabeecadda warka iyo saxaafadda soo gudbinaysa intaba.
John McCain oo ah senator Maraykan ah oo laga soo doorto gobolka Arizona ayaa waxauu qoray in shantii sanno iyo barkii uu ugu xirnaa maxbuus dagaal ahaan magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, waxa uu tebayay inaanay ahayn raaxo, cunto, xoriyad iyo xataa qoyskiisii iyo asxaabtiisii midna balse ay ahayd waxa ugu muhiimsan ee ka maqani war (information) daray ah oo aan faaf reeb lagu samayn.
Hadaba shabakadaha Soomaalida ayaa intooda badan waxaa ka muuqata inay gacata ku hayaan dad aan xilkas ahayn, fahamsanayna masuuliyadda culus ee ay leedahay saxafinimadu.
Shabakadahan ayay ku yaryihiin inta ku socota dariiqa saxaafadda xorta ah, badankooduna waa kuwo u adeegga shakhsiyaad, reero ama maamulo gaara iyagoo isla markaana fidiya nacayb, hurin colaadeed iyo af lagaado iyo cay shakhsiyeed oo marka aad akhrido aad ka yaq yaqsoonayso sida ay xishoodkii, akhlaaqdii iyo dhaqankii suubanaa uga fogyihiin.
Shabakadaha noocan ahi waxay noqdeen gole ay geel jirayashu ku caytamaan, fadhi ku dirirka iyo qoraal baradkuna ku hardamaan iyadoo aanay wax haba yaraatee faa’ido ah ka helin akhristayaasha waqti dhumin mooyaane.
Shacabka Soomaaliyeed muddo 14 sanno ka badan ayay ku soo qaateen dagaalo qabiil, dawlad la’aan iyo dar xumooyin kaleba, hase yeeshee waxaad moodaa hadda uun inuu bilawday dagaalka dhinaca saxaafaddu halkii laga rabay saxaafaddu inay noqoto midda horseedka u ah isu soo dhawaanshaha iyo nabad ku wada noolaanshaha shacabka walaalaha ah ee Soomaaliyeed.
Xilkasnimo darrada tafatirayaasha shabakadaha qaarkood ayaa keentay in wararkoodu ay noqdaan kuwo aan lagu kalsoonaan karin oo u badan dacaayad iyo jahawareerinta akhristayaasha.
Arintaas aan kor ku soo xusay ayaa waxay sababtay in dad badan marka war loo sheego, haddii isha warkaasi tahay internetka uu isla markiiba mugdi ka galo xaqiiqada warkaas oo uu u arko ku tiri kuteen iyo wax aan lagu kalsoonan karin.
Taasi macnaheedu ma ahan in shabakadaha Soomaalida oo dhammi ay yihiin goobo fadhi ku dirirku ku madadaasho ee waxaa jira kuwo badan oo si xil kasnimo iyo aqooni ku dheehantahay hawshooda u guta, akhristayaashooduna ay aad uga faa’idaystaan, abaal weyna u hayaan.
Sidoo kale waxaa iyana jira dad badan oo qoraaladooda ay ka muuqato aqoon iyo haybad qoraanimo oo akhristayaashu marka ay arkaan magacooda si kalsooni ku jirto ugu dhiiradaan akhrinta qoraalkooda saa waxay ogyihiin oo uga barteen inaanay ku hungoobayane.
Waxaan shaki ku jirin in shabakadahan tirada badan haddii loo adeegsado dhinaca fiican ay wax tar weyn u yeelan karaan shacabka Soomaaliyeed, kaalin weyna ka qaadan karaan wacyi gelinta iyo kor u qaadidda aqoonta bulshada Soomaaliyeed ee jaahilnimada iyo qabyaaladdu isugu darsameen.
Ugu dambaystii Tafatire, Saxafi iyo Qoraa midkaad doontaba ahaawoo weligaa ha noqon kii fitno abuura inuu damiyo mooyee, ogowna”Afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara’e”.(Salaan carrabay)
SomaliTalk Nairobi | Nov 16, 2004